तिहार र यससँगैका अन्य पर्वहरू : सबैमा मंगलमय शुभकामना ! - तिहार र यससँगैका अन्य पर्वहरू : सबैमा मंगलमय शुभकामना !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ कार्तिक, 11:01:52 AM
तिहारलाई यमपञ्चक अवधिको एउटा हिन्दूचाडको रुपमा मात्र हेर्नु कमजोर वैचारिक स्तरमात्र होइन, नेपाली संस्कृतिको वैभवप्रति उपेक्षा र तिरस्कार गर्न खोजेको प्रतित हन्छ ।
यो यस्तो चाड हो, जसले मानिसलाई मात्र होइन , काग, कुकुर, गाई–गोरूको पनि पूजा गराउँछ । हिन्दु धर्म र संस्कृति चाडपर्वका सन्दर्भमा विरोधाभासपूर्ण छ । दशैँले पशु–पंक्षीको बली खोज्छ तर तिहारले तिनै पशुपंक्षीलाई फूलमाला र पूजासहित उनीहरूलाई रुचिकर लाग्ने खाना खुवाउन मानिसलाई अह«ाउँछ ।
दशैँ मनाउन उदासिनता देखाउनेहरू पनि तिहार मनाउन उत्सुक र उत्साही हुन्छन् । त्यसैले तिहार सद्भाव, शान्ति र समृद्धिको पर्व मानिन्छ ।अघि नै भनियो तिहार केवल एउटा चाड होइन । यो चाडको मुहूर्तसँग अन्य रमणीय र स्मरणीय सन्दर्भ जोडिएका छन् । तिनलाई यहाँ एकएक गरी सम्झिएमा तिहारको गरिमा झन् बढ्छ ।
उनको अद्भुत प्रतिभा र असाधारण स्वभावलाई पचाउन नसकेर ‘पागल’करार गरी राँची पु¥याउँदा राँचीको पागलखानाका अँग्रेज डाक्टर बर्कले हिलले भनेका थिए, “मिस्टर देवकोटा पागल होइनन्, उनीजस्तो मान्छे भौगोलिक गल्तीले नेपालजस्तो मुलुकमा जन्मिएका हुन् ।”
तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिन नेपाली साहित्यका महान विभूति महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म भएको हो । यसकारण साहित्यकारहरूका लागि लक्ष्मीपूजाको दीपावली प्रेरणा पर्वका रुपमा आउने गर्छ । सरस्वतीका प्रतिभा–पुत्र महाकवि देवकोटा ‘लक्ष्मी’कै नामबाट सुपरिचित भए । उनको अद्भुत प्रतिभा र असाधारण स्वभावलाई पचाउन नसकेर ‘पागल’करार गरी राँची पु¥याउँदा राँचीको पागलखानाका अँग्रेज डाक्टर बर्कले हिलले भनेका थिए, “मिस्टर देवकोटा पागल होइनन्, उनीजस्तो मान्छे भौगोलिक गल्तीले नेपालजस्तो मुलुकमा जन्मिएका हुन् ।”
महापुरुषका जीवनी लेखक तथा नियात्रा लेखनका हिन्दुस्तानी जनक राहूल सांकृत्यायनले एक्लो देवकोटामा प्रखात तीन हिन्दी कविहरू– प्रसाद, पन्त र निराला (जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानन्द पन्त र महाकवि सूर्यकान्त त्रिपाठी ‘निराला’) को प्रतिभा भएको ब्याख्या गरेका छन् । महाकविजीका ८४ वटा कृति प्रकाशित भइसकेका छन् । अझै दुई दर्जनजति प्रकाशन हुन बाँकी नै छन् । नोबेल साहित्य पुरस्कारको योग्य पात्र देवकोटाले नेपाली साहित्यमा अमूल्य भण्डार छोडेर गएका छन् । उनको जन्मले तिहारलाई अझ महिमामण्डित वा गरिमामय बनाएको छ ।
भाईटीकाको भोलीपल्टै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको जन्मजयन्तीको अवसर आउँछ । १९७२ साल कार्तिक त्रयोदशी (२४ गते) जन्मनु भएका गणेशमानजी नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अनवरत र सार्थक नेतृत्व दिनुभएको हुनाले उनको जन्मजयन्ती (यसपाली १०४औँ जन्मजयन्ती) लाई तिहारसँगै राष्ट्रिय पर्वको रुपमा श्रद्धापूर्वक मनाइन्छ ।
यसपाली नेपाल सम्वत ११३९ हो । प्राचीन समाजसेवी तथा समाज सुधारक शंखधर साख्वाले सबै जनताको ऋणमोचन गरेको किंदन्तीमा आधारित यो संवतले अव राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ ।
तिहार नसकिँदै नेपालको एउटा महत्वपूर्ण क्यालेन्डर ‘नेपाल सम्वत’को आगमन हुन्छ । यसलाई नेपालका नेवार समुदायले राष्ट्रिय सम्वत र गरिमादायी पर्वको रुपमा मनाउने गर्छन् । यसपाली नेपाल सम्वत ११३९ हो । प्राचीन समाजसेवी तथा समाज सुधारक शंखधर साख्वाले सबै जनताको ऋणमोचन गरेको किंदन्तीमा आधारित यो संवतले अव राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ ।
तिहारमा धनतेरस पर्वकै दिन आयुर्वेद जगतका जनकऋषि धन्वन्तरी संसारमा पैदा भएको पौराणिक मान्यता यही तिहारको रमझममा पर्दछ । देवता र दैत्यहरूले समुद्र मन्थनगर्दा प्रकट भएका १४ अलौकिक सामग्रीमा एक आदिचिकित्सक ऋषि धन्वन्तरि पनि हातमा औषधीको कलश बोकेर प्रकट भएका हुन् भनिएको छ । आयुर्वेद विधाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू त्यो दिनलाई आफ्नो व्यवसायजन्य पर्वको रुपमा मनाउने गर्छन् ।
यसप्रकार तिहारलाई अन्य चाडपर्वहरूको संगम पर्वका रुपमा लिँदा अतिशयोक्ति हुँदैन, बरू तिहारको व्यापकतामा अन्तरनिहित गहन र महानता प्रमाणित हुन्छ । दिदीबहिनी र दाजुभाईका बीच हुनुपर्ने स्नेह, विश्वास र हार्दिकतामा यसले वजन थप्दछ । समृद्धिको खोजीले मानिसलाई नयाँ आविष्कार तथा सिर्जनाका लागि प्रेरणा दिन्छ ।
तिहारको लगत्तै तराईवासी जनसमुदायको महत्वपूर्ण पर्व ‘छठ’ को आगमनले थप चहलपहल र आकर्षक बनाउँछ । तिहार आएपछि छठ पनि आइहाल्यो भन्ने सुझबुझका साथ लिन थालिएको छ । उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यको पवित्र उपासना गरेर परिवार तथा समाजमा आरोग्य र सुख–शान्तिको प्रार्थना गरिने यो पर्वलाई अब क्रमशः पहाडे समुदायले पनि सहजताका साथ अपनाउन थालेका छन् ।
तिहार मनाउने क्रममा यसभित्र विकृति र विसंगति नघुसेको होइनन् । नहुनेका लागि चाडहरू सहज होइन कठोरताका प्रतिक र ठूलो खड्गोका रुपमा पनि देखिन थालेका छन् । तिहारमा हुने जुवा–तास र लाखौँको पराजयका खेलले मानिसको जीवन बर्वाद बनाएको र पारिवारिक कलह बढाएका घटनाहरू पनि मानवजीवनका लागि अकाट्य पाठका रुपमा रहेका छन् ।
त्यसैकारण चाडपर्व मनाउँदा विपन्न समुदायको मन खिन्न र रुष्ट हुने किसिमले मनाउनु उचित हुँदैन । सादगी वा सरलताभन्दा ठूलो मानवीय गुण कुनै हुँदैन । चाडपर्व र सांस्कृतिक अवसरहरू मानवताको उत्थान र आसुरी प्रवृत्तिको विनासका लागि हुनुपर्छ भने यस्ता अपरिहार्य पक्षमा हामीले गम्भीर ध्यान पु¥याउनै पर्छ ।
२०७५ को तिहार र यस पर्वसँगै आएका महाकवि देवकोटा जयन्ती, सर्वमान्य नेता गणेशमान जयन्ती, नेपाल संवतको शुभ नयाँवर्ष, पवित्र छठ पर्व, धन्वन्तरि जयन्ती आदि छ वटै पर्वहरूले हामी सबैलाई सत्मार्ग दिउन् । शुभदीपावली २०७५ ले हामीलाई शान्ति, समृद्धि र सद्भावको उज्ज्वलमार्ग एवं गन्तब्यमा लैजाओस् ।
नेपाल बहस डटकम आफ्ना सबै पाठक, विज्ञापनदाता, सहयोगी र शुभेच्छुक लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाईहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
२०७५, २२ कार्तिक, 11:01:52 AM
कोइरालाहरूको ‘पुस्तेनी थलो’मा बिपी प्रतिष्ठान निर्माण गरिने
कांग्रेसले पुस १६ गते मेलमिलाप दिवस मनाउने